သောနုတ္ထိုရ်က ဆင်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်တယ်။
ဆင်က တိုက်ခိုက်တော့ ဆင်တွေ လေးစားတဲ့ အရဟတ္တဓဇ မြတ်သင်္ကန်းကို ပတ်ပြီး အသက်ဘေးကနေ လွတ်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။
အခု စစ်အုပ်စုတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကောင်းအောင် ဘယ်နေရာ လုပ်ပေးခဲ့ပါသလဲ။ သံဃာတော်များကို ဘယ်အဆင့်မှာ ကိုးကွယ်ထားပါသလဲ။ သံဃာတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့သလဲ။
ဦးဝီရသူနဲ့ ဆရာတော်ဦးတိလောကတို့က အသိဆုံးပါ။
ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတစ်ပါးကို အနှောင့်အယှက်သွားပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊
သူတစ်ပါးကို ဖိနှိပ်ဖို့ဆိုတာ စဉ်းတောင် မစဉ်းစားဘူး။
ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအဝိုင်းဟာ မိမိကိုယ်မှာ ဗုံးပတ်ပြီး အသေခံဗုံးခွဲသူများနဲ့ မဖွဲ့စည်းစေချင်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးအခွင့်အရေး ပေးရမယ်လို့ အစိုးရကို အကြပ်မကိုင်ရဘူး။ မဲရအောင် မဘသကို ထောက်ခံကြလို့ မပြောဟောဘူး။ ငါတို့ကို မထောက်ခံရင် နာပြီသာမှတ်လို့ မခြိမ်းခြောက်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အင်မတန်မှ သိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်။ သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ တရားဟောပလ္လင်ပေါ် ရောက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုလည်း နေ့တိုင်း သာသနာပြုနေရပါ့မယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက် တရားထိုင်သင့်တာပေါ့၊ ဒါမှ ကိုယ့်မှာ သာသနာမပျောက်ပျက်ဘဲ ရှိနေမှာပါ။ မိမိက အကောင်းဆုံး မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေရပါ့မယ်။ ဒါမှလည်း မိသားစုတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အသီးအပွင့်ကို ခံစားရမှာကိုး။ သူတိုဖခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ သူတို့က ဒီလိုအဆင့်မြင့်မြင့်နေရတာပါလို့ ဂုဏ်ယူနိုင်အောင် နေပြရမယ်။ ဒါလည်းပဲ ကိုယ့်မိသားစုကို သာသနာပြုတာ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအပါအဝင် နေရာတိုင်းမှာ သာသနာပြုရာနယ်မြေတွေပါပဲ။ ဘာသာခြားတွေကို တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းတာတွေ လုပ်ပေးမယ်၊
ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သာသနာပြုနေတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ပညာရှိတို့ရဲ့ သာသနာပြုနည်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ သာသနာပြုနည်းပါ။
This entry was posted on November 18, 2014 at 9:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
Naing Oo with Melvin Moe and 18 others